Nzira Yokudzivisa Duplicate Content? - Pindura Nechipupuriro CheSemalt, Natalia Khachaturyan
Kudzokorora kana kukopedzerwa zvarinoreva zvinoreva kuburitsa kwechinyorwa mukati uye kumativi ose ezvinyorwa zvinowirirana zvachose kana zvakafanana zvikuru. Mimwe mienzaniso yakawanda yekusina kuipa yakakopizwa zvinyorwa ndeiyi:
Nhengo dzemasangano dzinobudisa nguva dzose uye dzakabvarurwa-hurukuro uye dzinotarisirwa kumafoni emafoni uye mamwe maitiro akafanana
Zvinhu zvakachengetwa zvinoratidzwa uye zvakabatanidzwa kune URL dzakasiyana
Zvinyorwa-zvinyorwa zvese zvezvinyorwa uye webhu
The Content Strategist Semalt , Natalia Khachaturyan, anotsanangura kuti kana webhusaiti ine mapeji akawanda ane zvimwe zvakafanana, mikana ndeyokuti Google ichapora webhusaiti yako. Kazhinji kazhinji, spammers vanoita nemaune zvinyorwa munzvimbo dzakasiyana siyana uye vanoshandisa tsvakurudzo yekutsvaga kushandiswa kwepaiti uye vanowedzera mamwe mapeji pamapeji avo ewebhu. Miitiro yakadaro inonyengera inokonzera kusangana nevashumiri vanoshata - tavoli da ping pong da esterno usato. Apo vashanyi vanoona nyaya imwechete yakadzokororwa paIndaneti, haazoratidzi kufarira mune zvatinenge takaita. Google inoedza zvakanakisisa kutamba uye kuratidza mapeji ane ruzivo rwakasiyana. Inosvina nhamba yakawanda yewebsite uye inovhara masayiti ane magwaro akafanana kana zvinyorwa zvinyorwa.
Nzira yekugadzirisa sei zvinyorwa zvinyorwa?
Unogona kutora matanho ekutarisa zvinyorwa zvinyorwa paIndaneti, nekuita kuti vatenzi vade zvinyorwa zvako nekuda kwezvakabva.
Method №1: Shandisa 301
Dai iwe wakanga uchangobva kuchinja webhusaiti yako, unogona kushandisa
Nzira №2: Iva nemafungiro
Unofanirwa kuchengetedza kugara kwekubatanidza mukati uye nguva dzose uchishandisa domain-level domains kukura backlinks yewebsite yako. Aya mazita anofanira kunge akafanirwa newebsite yako uye inofanira kuva nyika chaiyo.
Kana wakabatanidza zvinyorwa kune mamwe mawebhusayithi, Google inogona kuratidza maBhaibheri akafanirwa uye akakodzera kuvashandisi varo. Iyi nzira inosimbisa kuti webhuti yako yehutano uye zvinyorwa zvinobatanidzwa uye zvinonamatira kumashoko ekutanga kana peji. Nokudaro, iwe unofanira kufambidzana nehuwandu hwezvinyorwa uye usingashandise plugins akawanda kuti uite basa iri.
Method №4: Shandisa tsvakurudzo yekutsvaga uye gadzirisa zvirongwa zvako
Unogona kushandisa tsvakurudzo yekutsvaga uye utaurire munhu wose kuti iwe unoda sei kuti nzvimbo yako ichitsvaga kana kuti yakanyorerwa. Panzvimbo yekushandisa rugwaro rwakapetwa runyoro pasi peji rega rega, unofanirwa kunyora chidimbu uye uiendese kumapeji ose uchishandisa WordPress plugin.
Unofanira kuderedza bhailerplate kudzokorora kuti uve nechokwadi chekuchengeteka kwewebsite paIndaneti. Semuenzaniso, unogona kunyora chidimbu uye uchisanise pamapeji nemamwe mashoko. Zvimwewo, unogona kuedza Parameter Handling tool yekuratidza kuti unoda sei Google, Bing, uye Yahoo kuti uchengetedze nzvimbo yako uye URL dzemiganhu.
Zvinyorwa zvinyorwa hazvisi zvikonzero zvekuita pane webhusaiti kusvikira yaonekwa paIndaneti nenhamba huru uye inoshandisa mitsva yekutsvaga mhinduro . Kana iwe nzvimbo yako iri kutambura kubva pakopihwa kana kudhinda nyaya yakagadzikana, uye iwe usingazivi zvokuita, zviri nani kuti utaure kune dzimwe nzvimbo dzevatariri uye kuti zvinyorwa zvabviswa. Iwe unogonawo kuisa chikumbiro chako kuGoogle, uye injini yekutsvaga ichabvisa mapepa anoputsa kubva mumigumisiro yaro.